Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Nairobi si uu uga qaybgalo shir-weynaha Afrika iyo Japan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Nairobi si uu uga qaybgalo shir-weynaha Afrika iyo Japan
August 26, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo ka dagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Jimce ah gaaray magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya si uu uga qaybgalo shir-weynaha Afrika iyo dalka Japan.
Shirka oo ay kasoo qaybgalayaan hoggaamiyaasha wadamada qaarada Afrika iyo madaxda dalka Japan ayaa beri oo Sabti ah ka furmaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo socon doona muddo labo maalmood ah.
Shirka wadamada Afrika iyo dalka Japan ayaa soo bilaabmay sanadkii 1993-dii, shirkan oo ah kii lixaad ayaa markii ugu horeysay lagu qabanayaa gudaha qaarada Afrika iyadoo kuwii hore lagu qaban jiray caasimada dalka Japan ee Tokyo.
Japan ayaa ahaan jiray dalka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la leh qaarada Afrika kahor inta uusan kala wareegin dalka Shiinaha.
Wadamada horumaray ayaa ku tartmaya xiriirka ganacsi ee qaarada khayraadka ka buuxo ee Afrika, wadanka Shiinaha ayaa hadda ah wadanka ugu weyn ee xiriirka ganacsi la leh qaarada Afrika.
September 13, 2016 RW Itoobiya Hailemariam Desalegn oo gaaray Muqdisho si uu uga qaybgalo shir madaxeedka IGAD